Kwimizi-mveliso yeeMibhobho, abaXhasi - iTshayina yabenzi bemibhobho
I-Copper-plated Pipe Hanger Strap
Njengomnye weendawo zokuxhoma ezikhuphisanayo zenkampani, imitya yethu yobhedu eyenziwe ngemibhobho yokufumana umbhobho ifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwaye zenziwe ngobhedu ngokudityaniswa kwe-1/4 1/4 kunye ne-3/16-imingxunya yolwakhiwo.
I-UPC Plast 90 ° Ukurhoxiswa kweCamper Fastener
Njengomnye weendawo ezixhomisa amehlo kukhuphiswano lwenkampani, iiplastikhi zethu zokumisa i-90 ° zokumisa izinto zokubopha zivunyiwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, iimbambo zazo zivumela umbhobho ukuba uwele ngokulula nangokuthe cwaka xa umbhobho usanda kwaye usiya kwisivumelwano.
Isefu Pipe kwendawo yokuhlala Umtya
Njengomnye ezixhome kakhulu kukhuphiswano inkampani, umbhobho kwalenza iirholithi zethu iirholithi baye bafumana ukuthandwa enkulu ehlabathini lonke, ingakumbi eMntla Melika. Kwaye zenziwe ngobhedu ngokudityaniswa kwe-1/4 1/4 kunye ne-3/16-imingxunya yolwakhiwo.
UPC Plastic 180 ° Ukurhoxiswa uqinisa
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, iiplastikhi zethu zokumiswa kwe-180 ° zi-UPC zivunyiwe. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, iimbambo zazo zivumela umbhobho ukuba uwele ngokulula nangokuthe cwaka xa umbhobho usanda kunye nezivumelwano.
Isefu Pipe kwendawo yokuhlala Umtya Wave-Wa-
Njengomnye ezixhoma kukhuphiswano nkampani, umbhobho kwalenza umbhobho iirholithi zamabhanti amise-ezimilise ifumene enkulu ithandwa ehlabathini lonke, ingakumbi North America. Kwaye zitywinwe ngemingxuma eyi-3/16 struct ngokwendlela.
Njengomnye weendawo zokubeka izinto ezinokhuphiswano kwinkampani, ityhubhu yethu yeplastikhi yetyhubhu yamkelwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, iimbambo zazo zivumela umbhobho ukuba uwele ngokulula nangokuthe cwaka xa umbhobho usanda kunye nezivumelwano.
Plastic Pipe kwendawo yokuhlala Umtya
Njengomnye weendawo zokubeka ukhuphiswano kakhulu kwinkampani, iiplastiki zethu iirholithi zeplastikhi ziyilelwe ngendlela ekhawulezayo nexabiso eliphantsi yokuxhoma umbhobho kwiijoists okanye imiqadi. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona zenziwe nge-polyethylene.
I-UPC yePlastiki yePlastiki yokwambathisa
Njengenye yezona ndawo zixhomekeke kakhulu kukhuphiswano lwenkampani, ii-insulators zethu zeplastikhi zeplastikhi zivunyiwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, iimbambo zazo zivumela umbhobho ukuba uwele ngokulula nangokuthe cwaka xa umbhobho usanda kunye nezivumelwano.
I-Copper-plated Bell Hanger yokuNqunyanyiswa kweMibhobho engagqitywanga
Njengomnye weendawo ezixhomisa amehlo kukhuphiswano lwenkampani, i-hanger yentsimbi exutywe i-hanger yethu yenzelwe ukumisa imibhobho engafakwanga ubushushu. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, zibandakanyiwe izikhonkwane ezibini kunye nezikrufu esinye esonyukayo ngokwendlela.
UPC Plastic Half uqinisa
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, isiqingatha seplastikhi yamasango esisixhobo samkelwe yi-UPC. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kwakhona, ukufakela kuyakhawuleza kwaye kulula.
IMilford Hanger isetyenziselwa ukuxhoma umbhobho wobhedu kwinto
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iiMilford hanger zethu zisetyenziselwa ukuxhoma umbhobho wobhedu kwinto. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika.
Ukumiswa kwebracket eguqukayo
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iibakaki zethu zokumiswa ezinokuhlengahlengiswa ziyilelwe ngoyilo lweengceba ezimbini zilungelelanisa uluhlu lokuvula okuvula. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika.